Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा भाडादारों बाहिर निकाल | Holmbygden.se
Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा भाडादारों बाहिर निकाल
पोस्ट 26 नोभेम्बर, 2013 द्वारा Holmbygden.se
Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा संस्थाये समीक्षा रिपोर्ट रिपोर्ट लागि भाडादारों terminates. Östersundsposten को माइग्रेसन बोर्ड गरेको शरण आवास डायल गर्न कम्पनीको प्रस्तावको प्रतिनिधिहरु, तर कसैले प्रश्नहरूको जवाफ चाहन्छ.
जब Aros ऊर्जा प्रमाणीकरण पछिल्लो वसन्त शरण आवास, अरु को बीच लागि अध्यागमन सेवा गर्न आफ्नो कोमल पठाइएको. एक. अपसला बाहिर Holm Tobo पहिले नै बाँचिरहेका छौं भनेर मानिसहरूलाई अपार्टमेन्ट संग गरे. को गर्मी समयमा, फरक Holm मा भाडादारों प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको छ. अब एउटै Tobo तल गर्न प्रयास, हुनत भाडादारों अनुबंध र रहन सही छ.
पछिल्लो बुधवार जिम्मेवारी Aros Energideklarationers आवास धेरै दुर्व्यवहार Tobo मा भाडादारों को स्थिति मा एक रिपोर्ट समीक्षा थियो. माइकल Sterner कम्पनी तिनीहरूले एक संवाद सुरु गर्न र त्रुटिहरू गर्न ल्याउन गर्नुपर्छ भनेर कार्यक्रम मा भन्छन्. Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा सट्टा अब Tobo मा भाडादारों बाहिर निकाल गर्न चाहनुहुन्छ कि राम्रो संवाद रिपोर्ट विपरीत Arbetarbladet. भाडादारों संघ बासिन्दा पक्षमा अब खडा.
Holm देखि पहिचान आफ्नो भाडादारों बाहिर फालिएको प्रक्रिया. Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा बहुमत मालिक छ जो मार्कस Hamberg पनि बाहिर गत वर्ष Holm आफ्नो पुरानो भाडादार फाले. त्यो त्यहाँ बस्ने हुनत नगरपालिका सम्पत्ति स्वामित्व भएदेखि, त्यो Holm मा आफ्नो घर छोड्न द्वारा Marus Hambergs कम्पनीहरु Fagerhyltan बाध्य भएको थियो. बस 20 दिन त्यो दूर हुनेछ.
- म Holm सबै मेरो जीवन बस्ने किनभने सार्न चाहनुहुन्छ छैन, त्यो भने.
20/4 2012 ST: Nu töms husen i Holm बाहिर हालियो गर्ने भाडादार थप पढ्नुहोस्.
Östersundsposten पनि हिजो धेरै लेख लेखे Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा र अर्को कम्पनी को, FIRMA टी Widéen. छिमेकी काउन्टी धेरै स्थानहरू मा, दुई कम्पनीहरु शरण आवास को लागि बिड खोजे. को रूपरेखा अनुसार कम्पनीहरु leases र आफ्नो आश्रय आवास को गुण को कामहरू दुवै अभाव, तापनि तिनीहरूले स्वीडिश माइग्रेसन बोर्ड को मालिक हो कि लिखित छ.
RIP कल माइग्रेसन बोर्ड काम गर्दछ सल्लाहको केन्ट Juhlén र सोध्छन् त्यो अनौठो फेला पार्न सक्नुहुन्न भने. – “पहिले नै, मलाई लाग्छ. यो मामला गलत विवरण छ”, उहाँले जवाफ. Kent Juhlén को माइग्रेसन बोर्ड कम्पनीहरु investigates भन्छन्.
RIP पनि माथि टी Widéen छल्ले, तर त्यसपछि Bracke देखि सट्टा चाय छोरी Pia Karlsson प्रतिक्रिया. टेलिफोन Bracke संग एक Pia Karlsson पनि Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा लागि सम्पर्क व्यक्ति छ र Bracke केवल एक Pia Karlsson छ.
त्यो Pia Karlsson Aros Energideklarationers निविदाहरु छ भने RIP सोध्छन्.
- न, यो मलाई छैन, पत्राचार Pia.
तपाईं कसरी एउटै नाम छ कि यो छ?
- म जवाफ सक्दैन, म Aros ऊर्जा घोषणाहरूमा के हो थाहा छैन र तपाईं बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ के बुझ्न छैन, भन्छन् Pia Karlsson.
Pia Karlsson र पूर्व मालिक “Skandalhusen” Holm मा जोहान नई stendahl बेतलबी भ्याट र पेरोल कर सहित एक घोटाले द्वारा बन्द भयो कि Hälsingland मा एक आश्रय आवास अघि सँगै थियो.
20/11 SR P4 UPPLAND: Skolvägen मा आवास “तपाईं छोड्न पनि घरहरू थप वा कम बाटो बिराएको” को अपार्टमेन्ट बारेमा रेडियो रिपोर्ट सुन्न, कि स्वास्थ्य जोखिम बताए.